Kalandarkaaga u dejiso bilaash | Abuurista khadka tooska ah
Judit Murcia | | Khayraadka
The 2019 In kasta oo ay weli hadhsan tahay bil iyo xoogaa, haddana waddooyinka waxaa ku qulqulaya Kirismaska ​​oo waxay naga dhigayaan inaan ka fikirno sanadka cusub ee ku saabsan.
Wax yar ayaa ka dhiman in la dhammeeyo sanadkan 2018 iyo si aanan u degdegin waxaan rabnaa ku siin kara ilo kaa caawinaya inaad cagta midig uga degto soo socda 2019. Dhammaantood waa bilaash, markaa xulo midka aad ugu jeceshahay.
1 Qaabka iyo qaabka
2 Degso degellada internetka
3 Kalandarka oo leh nashqado qurux badan
4 Jadwalka taariikhda qaabka
Qaabka iyo qaabka
Waa inaan u diyaar garownaa si uusan dibigu inoo qaban, waxaana dhamaanteen jecel nahay inaan yeelano jadwal taariikhi ah oo aan isku abaabulno. Waxaan u haynaa iyaga qaabab kasta:
para iska dhig derbiga dushiisa.
En Excel inaan ku abaabulo mashaariicdeena kumbuyuutarka.
para daabac oo waxay leeyihiin albaab gadaashiisa.
Aan wadaagno naqshado kala duwan markaa waxaad dooran kartaa midka ku habboon dhadhankaaga. Qaar ka mid ah ayaa leh kordhinta .ai, taasi waxay ka dhigan tahay taas waad tafatiri kartaa leh Adobe Illustrator. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, balooggan waxaad ka heli kartaa Casharrada si aad u baratid inaad is maamusho.
Degso degellada internetka
Thanks to internetka, halkaas oo aad ka heli karto wax walba iyo in ka badan, waxaan haysanaa fursado badan oo aan kuheli karno kalandarka sanadkaan soo socda ee 2019.
Waxaa jira degello degello bilaash ah oo Waxay bixiyaan isbuucyo, bille iyo kalandar sanadle ah oo la daawado. Kuwan dambe ayaa ah kuwa ugu badan.
Inta badan xiriiriyeyaasha aan ku siinno kuu ogolaanayaa inaad kala soo baxdo fayl zip ah. Dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa dukumiintiyo dhowr ah oo qaabab kala duwan leh: jpg, ai, eps, iyo faylal kale.
Kalandarka oo leh nashqado qurux badan
Naqshaddani waa mid aad u moderno, midabada dhexdhexaadka ah ee midabada cirro leh. Oo inkasta oo ay ku jirto ingiriisiWaan ka badali karnaa feylka .ai oo waxaan ku badalnaa magaca bilaha qaab aad u fudud laba jeer guji qoraalka. Waxaad aadi kartaa bogga soo degsashada adigoo gujinaya Halkan.
Naqshad aad u badan saaxiibtinimo iyo ciyaalnimo taas oo bil kasta ay tahay a xoolaha kala duwan Waxaan uga isticmaali karnaa tan xanaanada caruurta ama caruurteena yar yar. Waxaad aadi kartaa degelka degelka adigoo gujinaya Halkan.
Este link Waxay noo tilmaamaysaa degel aad kala soo bixi karto bil kasta oo sanadka ka mid ah a Naqshad ubaxa oo aad u qurux badan. ka qaab qoriddu waa qoraal, taas oo ah, sidii in gacanta lagu qoray. Waa mid caqli badan oo ku habboon daabacaadda. Gujinaya Halkan ayaa ku geyn doona adiga Qalabka Google Drive, xagee ka heli kartaa cjadwal buuxa, liiska faylasha kala duwan.
Jadwalka taariikhda qaabka
Kalandarrada soo socdaa ayaa aad uga badan diiradda saaray abaabulka mashaariicda shaqada. Waxay ku saabsan tahay faylasha ereyga oo maran inaad ku haysato kombuyuutarka ama daabacan. Waxay ku habboon yihiin qorsheynta. Mid ka mid ah faa'iidooyinkooda ayaa ah inay yihiin tafatirka sidaas darteedna waxaan la qabsan karnaa baahiyaheena oo dhadhamiya. dhagsii Halkan si loo helo shabakadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kalandarka bilaashka ah ee 2019